Madagasikara : Mitohy ny fifandirana » lay andriamialy
Accueil Actus Madagasikara : Mitohy ny fifandirana
Pour lire l’équivalent de cet article en français, cliquer ici.
Mandeha ny fotoana. Efa amam-bolana maro sahady no voafidy ny Filoham-pirenena sy ny Governemanta ary ireo solombavam-bahoakan’ny Repoblika Fahaefatra. Hatramin’izao anefa mbola tsy hita ihany izay tena vokatry ny asan’izy ireo.
Ny olana dia marobe. Voalohany amin’izy ireny ny fahantrana. Tsy vitan’ny andro vitsy akory ny manala ny fahantrana amin’ny malagasy kanefa asa tsy maintsy atomboka izany. Ny olana hafa dia miankina amin’io fahantrana io avokoa. Ny tsy fahandriam-pahalemana, ny tsy fananana asa, ny tsy fahafahana mamorona asa, ny tsy fahampian’ny fanabeazana, sy ny sisa dia tokony hoatrehana avokoa. FA raha mbola noana ny kibo dia mivezivezy foana ny fanahy e!
Ilaina rehefa manao politilka ny « mampandry adrisa ». Kanefa tsy hahomby amin’ny malagasy intsony ny teny fandambolamboana sy ny fampanantenana poak’aty. Ny asa vita sy ny hita maso izao no mety hahomby kokoa.
Inona nefa no hitan’ny rehetra amin’izao fotoana izao? Ny adilahy sy ny fifampitahorana isan-karazany amin’ireo andrim-panjakana no re amin’ny haino aman-jery. Eo izany « dissolution de l’Assemblée Nationale » na fanafoanana ny solombavam-bahoaka izany izay arangarangan’ny Filoham-pirenena. Eo koa izany « motion de censure » izany izay mety ahafahan’ireo solombavam-bahoaka kosa mandrava ny governemanta raha lany. Ireo solombavam-bahoaka moa izany mitaky ny hanatsara ny toerana misy azy ka 10 tapitrisa isam-bolana be izao ny karama takiany ankoatra ny fiara sy ny « avantages » hafa tsy mbola fantatra.
Vay an-kandrina izany ka sady maharary no mahamenatra. Nefa aleo iaretana potsirina ihany ndrao manonitra satria izao tontolo izao mijery antsika. Tsy noho ny hena-maso anefa fa noho ny fitiavan-tanindrazana sy ny fanajan-tena ary ny fitiavana ny mpiray tanindrazana, aleo ho hita fa miasa isika ho fanavotam-pirenana.
Ireo firenena afrikanina dia miandrandra ny ho « tafavoaka » amin’ny taona 2020. Ahoana ny amintsika?
Article précédent Parodie : Iarivo tsy foiko
Article suivant Mpanohitra : Tsisy raisina ny TIM?
Tantara foronina mety hampihomehy! Indray andro hono zany ny tompon’andraikitra iray…
ai trouvé une idée de vlog musical : la diatonisation ou comment jouer tous les morceaux avec les touches blanches #harmonia #ambanivolo il y a 2 semaines
@critix tamin'ny orinasa iray izay mitovy lenta amin'ny karama iray volana im-18 eo ho eo no raisina isan-taona rehefa atambatra. il y a 1 mois
Fanorenana ifotony #gabon #Madagascar il y a 2 mois